सातामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको कारोबार, शेयरमूल्य १२५ ले बढ्यो
२०७७ कार्तिक, २९
कात्तिक २९, काठमाडौं । नेपालको शेयरबजारमा उत्साहजनक कारोबार यो साता सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने पहिलो नम्बरमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेको छ ।
यो साता रू. २० अर्ब २४ करोडभन्दा बढी शेयर कारोबार भएको छ । तिहार अघिको साता पाँच कारोबार दिनमा उक्त रकम बराबरको शेयर कारोबार हुँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सर्वाधिक हिस्सा ओगटेको छ । यो साता उक्त कम्पनीको रू. १ अर्ब ५७ करोड ५० लाख ३९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लाभांश वितरणमा रोक लगाएको उक्त कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट आकर्षक लाभांश दिने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुको छ । यो साता कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १२५ ले बढेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. ८५८ रहेको कम्पनीको शेयरमूल्य यो साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. ९८३ कायम भएको हो ।
यो साता सर्वाधिक कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीमध्ये दोस्रो नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र तेस्रो नम्बरमा हिमालयन डिष्टिलरी रहेको छ । यो साता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने चौथो नम्बरमा रहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये प्रभु बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने दश कम्पनीभित्र परेका छन् । यो साता नागरिक लगानी कोष र शिवम् सिमेण्टको पनि सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने दश कम्पनीभित्र आफ्नो स्थान बनाएका छन् ।
यो साता जलविद्युत क्षेत्रका दुई ओटा कम्पनी अपि पावर र अरुण काबेली पनि सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीभित्र परेका छन् । हाल ४७ प्रतिशत हकप्रद विक्री गरिरहेको अपि पावरको शेयर कारोबार पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ भने अरुण काबेलीको शेयर खरीदमा पनि लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढ्दो छ ।
यो साता सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीहरु :
सिद्धार्थ बैंकद्वारा १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव[२०७७ मंसिर, १९]
विश्वभरका फोटोग्राफरको सिर्जना अब धन्सार डटकममा [२०७७ मंसिर, १९]
स्रोत नखुलेको १६ लाखसहित एकजना पक्राउ [२०७७ मंसिर, १९]
डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या बढ्यो, २२ लाखभन्दा बढी पुग्यो डिम्याट खाता[२०७७ मंसिर, १९]
नेपाल बङ्गलादेश बैंकद्वारा सामुदायिक विकास समितिलाई रकम हस्तान्तरण [२०७७ मंसिर, १९]
हिमालयन डिष्टीलरीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा महेश प्रसाद पोखरेल[२०७७ मंसिर, १९]
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डले दियो अनुमति[२०७७ मंसिर, १९]
ब्रोकर कमिसन घटाउन माग गर्दै लगानीकर्ताले बुझाए धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापन पत्र [२०७७ मंसिर, १९]
सिद्धार्थ बैंकद्वारा १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव
विश्वभरका फोटोग्राफरको सिर्जना अब धन्सार डटकममा
आर्थिक पुनरुत्थान गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन